सजिलो दाँत सेतो प्राकृतिक बाटो | सेतो दाँत गाइड गर्न सर्वश्रेष्ठ बाटो
सजिलो दाँत सेतो प्राकृतिक बाटो
तपाईं चाहनुहुन्छ भने दाँत सेतो प्राकृतिक तरिकाती सबै महंगा किरा खरीद बिना, बस पटक पुराना फिर्ता जाने. हजुरआमा र आमा शायद पहिले नै थाह घर उपचार प्रयोग. यदि एउटा दुख्यो छ, दुखाइ, काटनु, वा अरू केही, त्यहाँ सधैं कहीं अल्मारी बाहिर लुकाउने समाधान वा उपचार थियो. समान दाँत whitening, लागू. विचार दाँत सेतो प्राकृतिक तरिका तल र परिणाम को चकित हुन व्यक्तिहरूलाई प्रयोग.
यदि तपाईं स्ट्रबेरी प्रेम र पाठ्यक्रम यसलाई एलर्जी छैनन्, एकै समयमा आफ्नो दाँत सेतो केही स्ट्रबेरी सर्टकेक बनाउन र. स्ट्रबेरी एक दाँत सेतो प्राकृतिक तरिका. बस आफ्नो मुखमा आधा र स्थानमा एक ठूलो स्ट्रबेरी कटौती. बनाउन भित्र आफ्नो मुख भित्र छ पक्का. तिनीहरू सबै गुलाबी समेटिएका नभएसम्म सबै आफ्नो दाँत भन्दा सबै कि स्वादिष्ट स्ट्रबेरी रस र स्ट्रबेरी RUB. राम्रो दस मिनेट प्रतिक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि आफ्नो टूथपेस्ट प्रयोग. पाठ्यक्रम तपाईंको टूथपेस्ट सबै प्राकृतिक हुनुपर्छ र कुनै abrasives वा अन्य हानिकारक प्रभाव. तपाईं चाहनुहुन्छ कसरी सेतो आधारमा, तपाईं एक दिन दुई पटक माझ जब यो दुई पटक एक दिन के. धैर्य राख, हरेक दिन तपाईं स्वाभाविक Whiter दाँत देख्ने. यो पनि आफ्नो दाँत मा दाग कम गर्न कफी दाग ​​र केहि मद्दत गर्नेछ.
तपाईं आफ्नो दाँत लागि बेकिंग सोडा को सुन्नु भएको हुन सक्छ. तपाईं छैन भने, त्यसपछि तिमी धेरै छन्, धेरै युवा. चालीस पचास वर्षको भन्दा जो कोहीले बेकिंग सोडा छ कि आमा वा हजुरआमा थाह दाँत सेतो प्राकृतिक तरिका बस आफ्नो दाँत लिंदा द्वारा. हो, शायद टूथपेस्ट प्रयोग भएको थियो. तर, तपाईं पुरानो पुस्ता आमाबाबुले थियो भने, बेकिंग सोडा सूचीमा सधैं थियो. हो यो साँच्चै काम र गैर घर्षण छ गर्छ. आफ्नो दाँत लिंदा जब यो एक हो रूपमा मात्र एक चौथाई प्रयोग दाँत सेतो प्राकृतिक तरिका. बस भिजेको आफ्नो टूथब्रश प्राप्त र बेकिंग सोडा यसलाई डिप. स्वाद हटाउन लिंदा पछि, भनेर सफा minty भावना लागि सबै प्राकृतिक मुख धुने प्रयोग. अब, तपाईं केवल धेरै जमानाको पुरानो सिकेका दाँत सेतो प्राकृतिक तरिकाघरमा.
हामी सबै संग सफा गर्न सिरका प्रयोग. तपाईं खरीद सफाई उत्पादनहरु कहीं यो मा सिरका छ, तिनीहरूले साँच्चै प्राकृतिक हो भने. जे भए पनि, दाँत सेतो प्राकृतिक तरिका मा घर, मात्र सेतो सिरका र बारेमा आधा कप प्रयोग. यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने पनि नुन को एक चमचा बारेमा थप. यो नुन संवेदनशील र रक्तस्राव छन् कि आफ्नो मसूडों अप कस मद्दत गर्छ. यो सहयोग गर्न एउटा प्राकृतिक उपाय छ. तपाईं रात मा सुत्न जाने अघि, बस यो mouthwash रूपमा प्रयोग र राम्ररी कुल्ला. तपाईंको दाँत बलियो र सुन्दर मुस्कान देखाउने.
घर पनि कठिन देखिन्छ तपाईं साँच्चै दाँत कसरी सेतो गर्न अल्छी र ती सबै विधिहरू सिक्दै हुनुहुन्छ भने, बस टंकशाला टूथपेस्ट प्रयोग. एक दिन प्रयोग यसलाई कम्तीमा पनि दुई तीन पटक. तपाईंको दाँत निश्चित धेरै छिटो स्पार्कलिंग हुनेछ. तपाईं साथै बारेमा विचार सन्दर्भमा थप जानकारी भेला गर्न भन्दा इन्टरनेट सर्फ गर्न सक्नुहुन्छ दाँत सेतो प्राकृतिक तरिका.
विभाग: सेतो दाँत सुझाव ट्याग: दाँत सेतो प्राकृतिक तरिका, स्ट्रबेरी, टूथपेस्ट, सेतो दाँत